Ivan Franko National University of Lviv - Study in Ukraine
fanafohezan-teny : IFNUL
Créé : 1661
Aza adino ny iaraho midinika ny Ivan Franko National University of Lviv
Ampiharo ny Ivan Franko National University of Lviv
Ny Ivan Franko National University of Lviv dia kilasika andrim-panjakana ny fampianarana ambony amin'ny fomban-drazana sy ny mahery maharitra sekoly ara-tsiansa fampidirana zava-baovao maoderina fironana. Ny University manana iraka manokana:
mba hamaritra sy hampihatra fanabeazana ary ny fitsipika siantifika;
mba hiteraka fiovana ilaina eo amin'ny faritra, firenena na izao tontolo izao;
mba hanangana ny maha - ny mpitondra ny ara-tsaina sy ny zava-baovao mety.
Ivan Franko National University of Lviv andraikitra eo amin'ny fototry ny fiarovana sy ny fampandrosoana ny kolontsaina Okrainiana nahatsiaro tena sy ny maha-pirenena.
Ivan Franko National University of Lviv mihazona ny 4faha ambaratonga ny fankatoavana avy amin'ny Minisiteran'ny Fampianarana sy ny Siansa any Ukraine sy manofana manam-pahaizana manokana ao amin'ny fahazoan fandaharana: 9 specialties iray panabeazana-fahaizany anivon'ny 'zandriny pahaizana manokana', 49 licence diplaoma fandaharan'asa, 82 specialties 'manam-pahaizana' sy ny 87 specialties 'tompony' ao amin'ny 17 sampan-pahalalana.
In 2014-2015 ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Siansa any Ukraine fahazoan-dalana 4 'Tanora manam-pahaizana manokana' ny fianarana saha, ofisialy 7 'Licence' specialties, 3 'Manokana' specialties, ary 3 'Tompoko' specialties. Mampianatra ny University manam-pahaizana manokana ao anatin'ny 144 'Manam-pahaizana' voatokana sy 161 'Tompoko' specialties. 32 voatokana vaovao no misokatra ao amin'ny University fahaizanareo. Fampandrosoana izahay koa dia manatera ny hoavy mpianatra na dia midadasika kokoa safidy: in 2015 8 specialties ao amin'ny sampam-pianarana ny Haiaina, Haibolantany, Toekarena sy Applied Matematika sy ny Informatika no nanaiky ho fahazoan-dalana sy ofisialy.
ankehitriny 19357 mpianatra mianatra ao amin'ny Lviv University avy izay 10202 ny toe-voatazona; 4332 ny olona miasa eto avy izay 2056 ny mpampianatra; 281 ny olona miasa ao amin'ny University siantifika
ary ny fikarohana departemanta. 220 Doctors ary 1119 Kandidà mampianatra eto; avy amin'ireo 203 olona mihazona ny toerana ny Profesora sy 794 olona docents.
Ivan Franko National University of Lviv ny laharam-pahamehana dia ny asa siantifika. In 2014 Nitarika ny University fikarohana siantifika ao amin'ny 35 fototra ary 10 Applied lohahevitra nankatoavin'ny Ministeran'ny Fampianarana sy ny Siansa any Ukraine, avy ireo 3 dia baiko avy amin'ny panjakana Agency ny Science, Baovao sy Informatization Okraina, 6 nataonareo tamin'ny fiarovana ny zavatra izay isan 'ny harem-pirenena ao Okraina, 3 dia tena-bola tetikasa sy ny 8 Grants ny International bola.
Ivan Franko National University of Lviv no mpanorina sy ny mpitory 44 boky sy gazety ara-tsiansa serial. Visnyk Universytetu (University Bulletin):Haiaina Series an'ny amin'ny lisitry ny iraisam-pirenena matihanina editionts Web ny Science. Journal of Physical Fianarana dia iray amin'ireo 42 gazety ao Okraina, izay an'ny banky angona iray bibliographic Scopus.
Izahay handeha eo amin'ny zava-bitany. Eto dia ho loha ny mifamadika amin'ny hamaroan'isa ny hatsaran'ny tondro: noho izany ny University stratejika ho azy no mamaritra tanjona ny:
fanatrarana ny fenitra ambony indrindra sy ny fanatontoloana ny fikarohana siantifika;
manome high quality ny fanabeazana dingana;
fanamafisana ny andraikitry ny amin'ny Oniversiten'i eo amin'ny fiaraha-monina;
famoronana ara-tsaina sangany;
fampandrosoana ara-kolontsaina tontolo iainana;
mamorona sy ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny maha tari-dalana ny olona;
-dalam-pandrosoana sy ny tanora ara-tantara nahatsiaro tena maha-pirenena;
fitomboan'ny zava-baovao fahafahana, tena mahafeno fepetra mampiofana mpiasa ao amin'ny fangatahana ny fiaraha-monina sy ny fanjakana;
University marika fampiroboroboana, mamorona ny fomba fijery iraisana ao amin'ny University any Ukraine sy tany ivelany;
lalina University fampidirana ho amin'izao tontolo izao fanabeazana sy ny siansa toerana;
maoderina ara-tsosialy, baovao sy ny fifandraisana sy ny foto-drafitrasa famokarana.
Fidirana dingana in Ivan Franko National University of Lviv
Fa mihatra amin'ny Ivan Franko National University of Lviv mpianatra vahiny tsy maintsy mampihatra-tserasera Okrainiana fieken-keloka amin'ny alalan'ny Center.
Faculty ny Applied Matematika sy ny Informatika
Faculty ny Fifandraisana iraisam-pirenena
Faculty ny Simia
Faculty Milina Tena sy ny Matematika
Faculty ny Electronics
Faculty ny Foreign Fiteny
Faculty ny Filozofia
Faculty ny Haibolantany
Faculty ny Preuniversity Fampiofanana
Faculty ny tantara
Department of fanabeazan'Andriamanitra
Department of Lalàna
Ny tantara ao amin'ny Oniversiten'i miverina any amin'ny taonjato faha-17.
ao amin'ny 16faha - 17faha taonjato, fraternities ara-pivavahana no foibe ara-kolontsaina ao amin'ny tany Okrainiana. Miaraka amin'ny fanohanan'ny burgers sy ny mpitondra fivavahana, dia nanampy nampiely ny hevitra ny maha olona sy ny siansa, ary koa ny vola harato ny sekoly. Ny tranainy indrindra any Ukraine firahalahiana no Stauropegic firahalahiana ao Lviv, izay lasa malaza foibe ara-kolontsaina Okrainiana. Nisy sekoly firahalahiana dia nisokatra tany Lviv in 1586. The Church slavonika, grika, Teny latinina sy Poloney fiteny ary koa ny matematika, fitsipi-pitenenana, kabary tsara lahatra, astronomia, filozofia sy ny fitsipika nampianarina eto. Lviv firahalahiana nisy mihitsy aza ireo mpikambana nikasa hiverina ny "himnasion" (raha atao hoe sekoly izany) any amin'ny oniversite. Miavaka toy izany sarin-Okrainiana kolontsaina ny faramparan'ny faha-16 tany am-piandohana 17faha taonjato araka ny Lavrentiy Zyzaniy (pickaback) sy ny rahalahiny Stepan, Kyrylo Stavrovetskyi, Ivan Boretskyi sy ny hafa niasa ary nahazo mari-pahaizana tany Lviv firahalahiana sekoly.
Ny tapaky ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia tsy nisy fampianarana ambony any Ukraine. Zavatra Gentry nanohitra ny fananganana sekoly ambaratonga faharoa, izay afaka ny ho tonga ara-politika sy ara-kolontsaina mampidi-doza foibe. Okrainiana tanora maintsy mandray fianarana ambony tao Krakow sy eoropeanina hafa anjerimanontolo.
Eo ambanin'ny fifanarahana Hadiach (1658) eo Ukraine sy ny Poloney-litoanianina Commonwealth, anjerimanontolo roa ireo mba hisokatra amin'ny tany Okrainiana: iray ao Kyiv sy ny hafa na inona na inona toerana mety tsara ho azy. Anjerimanontolo roa no nampanantenaina mitovy zo izay nanana Cracow University. Pahefana faribolana ao amin'ny Commonwealth noheveriny fa ambany ny tsindry ara-politika ny sasany toe-javatra roa-pirenena anjerimanontolo azo niforona any Ukraine. Mandritra izany fotoana izany, ny Zezoita Order ho fiarovana ny Katolika any Ukraine mipaingotra fanantenana lehibe eo amin'ny foibe any Lviv. Ny Zezoita niseho tao Lviv tamin'ny faramparan'ireo taona 17faha taonjato. In 1608, dia nanokatra ny sekoly eto. Ny tapaky ny taonjato fahafito ambin'ny folo nihena sekoly ity, nefa dia voavonjy amin'ny fandringanana satria dia tohanan'ny poloney magnates. Ny Zezoita nahatakatra ny mety hisian'ny fanorenana mifototra amin'ny oniversite ny sekoly ao Lviv. Dia nangataka foana ny mamadika ny sekoly ho toy ny Academy. Taorian'ny fangatahana imbetsaka, Janoary 20, 1661, Jan Mpanjaka II Kazimierz nanao sonia ny sata mifehy fanomezana ny sekoly eo ambany fiahian'ny ny Lviv Zezoita Collegium, "Ny voninahitry ny Akademia sy ny anaram-boninahitra ao amin'ny Oniversiten'i" miaraka amin'ny zo mba hampianarana foto-kevitra rehetra oniversite sy manome ambaratongam-licence, licentiate, tompony sy ny doctorat. Na izany aza, avy hatrany rehefa avy sonia ny sata mifehy, ny fananganana ny Akademia dia manohitra mafy ny Cracow University ary ny sasany pahefana manam-pahefana. Na dia eo aza ny vato misakana, ny fanadihadiana ao amin'ny University Lviv no nitarika teo amin'ny modely hafa akademia eoropeanina. Taty aoriana in 1758, Zavatra King Augustus III neken'ny ny sata mifehy navoakan'ny Jan II Kazimierz Janoary 20, 1661. Avy ny nanorenana mandra- 1773, Lviv University dia tanteraka eo ambany ny fanaraha-maso ny filaminana sy ny Zezoita dia subordinated ny Zezoita General tany Roma. Ny University dia tarihan'ny ny Rector. Ny tena fananganana ny Akademia Cracow akaikin 'ny arabe tao afovoan-tanàna. Ny University no nanao sy nividy hevi vaovao, nanana ny famakiam-boky sy ny trano fanontam-pirinty lehibe indrindra ao Lviv.
Ny University Nizara roa departemanta (fahaizanareo): filozofia sy teolojika. Nisy mialoha anjerimanontolo sekoly ho an'ireo maniry ny hanohy ny fianarany amin'ny oniversite.
Rakitsoratra ara-tantara dia mampiseho fa amin'ny 1667, about 500 Nianatra ireo mpianatra sy mpampianatra valo niasa tao amin'ny filôzôfia sy ny departemanta teolojika. Ao amin'ny antenatenan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, ny isan'ny mpianatra nitombo 700, ny isan'ny mpampianatra amin'ny 15-17. Poloney nanao ny 75% ny mpianatra, ny sisa no solontenan'ny ny Okrainiana sy ny vondrom-poko hafa.
Ny fianarana dingana ao Lviv University dia nitarika araka ny sekoly zezoita fandaharana mivoatra ao amin'ny faramparan'ny taonjato faha-XVI. Fiovana manan-danja ao amin'ny fandaharana natao afa-tsy ny tapaky ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Noho ny sampan-draharaha ny filozofia, indrindra ny filozofika tontolo Aristote nampianarina, anisan'izany lojika, Fizika sy ny metafizikan; niteny fizika, ny singa matematika, astronomia, Haiaina, Haitoetrandro dia noheverina; niteny ny metafizikan - ilay adihevitra momba ny psikolojia sy ny etikan'ny. Ankoatra, tantara, jeografia, Grika ary ny sasany dia nampianarina lohahevitra. Noho ny sampan-draharaha ny filozofia, fampianarana Naharitra nandritra ny roa na telo taona. Rehefa vita fianarana amin'ny sampan-draharaha ity, misy afaka mahazo fampianarana teolojika. Noho ny sampan-draharaha ny teolojia, fampianarana Naharitra efa-taona. tantaran'ny Fiangonana, Testamenta Taloha sy Vaovao, mitompo teny fantatra sy ny fitondran-tena teolojia, Canon lalàna, casuistry, ny teny hebreo io dia nampianarina ao amin'ny sampan-draharaha. Oniversite taranja rehetra nampianarina ny mpampianatra.
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ny noho ny fampandrosoana ny fahalalana ara-tsiansa, sasany fiovana nitranga teo amin'ny dingan 'ny fanabeazana ny oniversite. In 1744 sampan-draharaha ny matematika dia nisokatra, tarihan'ny F. Grodzicki izay mpanoratra ny boky ao amin'ny trano sy ny matematika. Ny matematika Physics laboratoara sy ny University Takelaka Momba ny Kintana Observatory nisokatra. poloney, frantsay, alemaina, jeografia sy ny tantara nampianarina ho misaraka lohahevitra. Mpahay siansa malaza niasa eto: mpahay tantara K. Niesiecki, mpahay matematika F. Grodzitski sy T.Siekierzyński, mpanoratra G.Piramowicz, endrika bahoaka, poeta, mpanoratra sady filozofa I. Krasicki. Malaza toy izany ny olona araka izay. Giesel, M.Slotvynskyi, Ya.Bohomolovskyi sy ny maro hafa ireo nahazo diplaoma oniversite.
Taorian'ny faharavan'ny ny Zezoita Order in 1773, Lviv University nakatona. Tsy ho ela, na izany aza, maro ny vondrona ao amin'ny Akademia Zezoita nametraka ny fototra ho an'ny Emperora Joseph University in Lviv.
In 1772, Galicie Lasa anisan'ny Fanjakana ny Aotrisiana. Mba centralize sy germanize iraisam-pirenena ny fanjakana, ny governemanta Emperora Joseph II nandoa be ny saina ho fanabeazana, ao anatin'izany ny fianarana ambony. Lviv envisaged ny oniversite. Fanoloana ny fampianarana tao amin'ny sampan-draharaha toerana dia tokony hatao amin'ny alalan'ny fifaninanana amin'ny fieken-keloka ny kandidà na inona na inona ny zom-pirenena sy ny fiangonana.
Ny oniversite dia nomena ny faritry ny teo aloha Order Trinite in Krakivska eny an-dalana. Ny governemanta ny sata 17 Jona 1784 mamaritra ny mpiasa ao amin'ny sampam-pianarana anjerimanontolo sy ny teti-bola. Tamin'ny volana Oktobra tamin'io taona io ihany, ny diplaoma sy ny mpitari-dalana ho an'ny fitantanana ny oniversite dia namoaka. Ao amin'ny diplaoma dia nilaza fa Lviv University Nizara efatra fahaizanareo: filozofia, lalàna, fitsaboana sy ny ara-teôlôjia. University fitokanana nitranga in Novambra 16faha, 1784.
Ao amin'ny vanim-potoana teo anelanelan'ny 1805 ary 1817, ny sekoly niasa teo amin'ny faritry ny Lviv University. Izany dia noho ny fanavaozana ny fampianarana ambony ao amin'ny fanjakana Aotrisiana. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny ankamaroan'ny vahoakany mbola ho ampianarina ao amin'ny oniversite tafiditra. Toy izany koa misaina nanohy ny asany.
Ny ambony indrindra Fitambara-mpitantana ny oniversite dia ny Antenimieran-doholona (consistory). Izany Nizara ny Rector, deans sy ny zokiolona (ny tranainy sy ny mpampianatra za-draharaha indrindra). Tapa-kevitra ny Antenimieran-doholona ny olana lehibe izay mikasika ny ankapobeny fitantanana ny oniversite. Tranga hafa rehetra dia tapa-kevitra ny deans izay niara-niasa ihany koa toy ny mpitantana ny fahaizanareo. Tsara homarihina fa nanana ny oniversite fizakan.
Ny sekoly ambaratonga faharoa niorina tany 1784 no tompon'andraikitra amin'ny fanomanana mpianatra noho ny hiditra ao amin'ny oniversite. Training dia natao tamin'ny teny alemà sy latinina ary naharitra 5 taona. Tamin'ny telo taona voalohany nampiasa ny mpianatra rehetra Faculty of Filozofia fandaharana ao amin'ny fianarana. Rehefa avy nahazo diplaoma avy amin'ny sampam-pianarana ny Filozofia, mpianatra na nanohy ny fianarany teny amin'ny sampam-pianarana iray ihany, mba hampitombo ny fahalalany momba ny foto-kevitra, na dia nisafidy manokana ny iray tamin'ireo ambony fahaizanareo - lalàna, fanafody na ny teolojia, izay fampiofanana Naharitra efa-taona. Fampianarana dia natao amin'ny teny latinina, Poloney sy alemà. In 1825 ny sampan-draharaha ny teny sy ny boky aman-gazety Poloney nosokafana.
In 1787, Studium Ruthenum niasa tao amin'ny Theological Faculty. Tamin'ny roa taona Mazava ho azy fa natao in Okrainiana. Tsy nanohy ny asany mandra- 1806. Malaza toy izany olo-malaza ao amin'ny firenena araka ny Markiyan Okrainiana Shashkevych, Yakiv Holovatskyi, Yuriy Venelin (foana) dia mifandray amin'ny Lviv University of voalohany am-polony taona ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Fizìka tao Lviv University ao amin'ny tapany faharoa ny fahavalo ambin'ny folo an'i am-piandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no nisolo tena ny Profesora F. Guss fanohanana ara-bola, I. Martinovics, A. Hiltenbrand, Ivan Zemanchyk, A. Gloisner, A. Kunzek sy A. Zawadzki, nefa vitsy amin'izy ireo nanana siansa zava-bita eo amin'ny sehatry ny siansa ara-batana. Manokana, prof. I. Martinovics (1755-1795) Nanoratra boky fianarana boky roa eo amin'ny fanandramana fizika. Ny mpahay siansa malaza ny 1780s, F. Guss fanohanana ara-bola (1741-1806) nivoaka tamin'ny Vienna roa-boky famaritana ny taona eto an-tany eo amin'ny lafiny fizika. Ivan Zemanchyk no nampitombo be ny habetsaky ny fitaovana hita ao amin'ny sampam-pianarana. Prof. A.Kunzek (1795-1865), izay liana amin'ny Fizika, ankoatra ny astronomia, ary nampianatra mihitsy aza kajy sy ny kilasika philology, Nanoratra taratasy ara-tsiansa sy ny boky fito (e.g, "Ny Fotopampianaran 'i Fahazavana", "Popular Astronomia,"" Popular Science ny Haitoetrandro "sns).
Schiverek (1742-1807) no voalohany zavamaniry sy ny mpampianatra simia tao Lviv University. Ny tena zava-bita ahitana rano mineraly Fampianarana mipetraka any Subcarpathia ary mametraka ny Botanical Garden.
Ny iray amin'ireo mpahay matematika matihanina voalohany tao amin'ny University i F. Kodesh (1761-1831), izay nanoratra ny boky ao amin'ny matematika. Ny boky "singa Pure Mechanics" nitondra voninahitra ho an'ny mpahay matematika niavaka Aotrisiana L. Schulz ny Straßnitzki(1803-1852), izay nampianatra tany amin'ny oniversite ao amin'ny 1834-1838. Ny tantara momba ny voajanahary dia nampianatra tao amin'ny Oniversiten'i ny Prof. B. Hacquet (1740-1815). Izy dia mpisava lalana tany an-tsaha ny Haibolantany any Galicie.
Eo amin'ny sehatry ny filozofia, ny anaran 'i Petro Lodiy (1764-1829) dia tokony ho voalaza. Nanoratra izy hoe ao anatin'izany bokyMetafizikan sy ny Logic Torolalana. Maro ny asa ao amin'ny filozofia koa nosoratan 'I. Hanus (1812-1869). L. folo Mark (1753-1814) no voalohany mpampianatra tantara ao amin'ny Oniversiten'i. Izy ihany koa manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny vondrona fanampiny fitsipika ara-tantara, ary nanoratra boky momba ity olana ity. G. Uhlich (1743-1794) no voalohany mpampianatra mpanampy ara-tantara fitsipika. Dia nanorina ny mamaky efitrano tany Lviv, nanoratra boky ao amin'ny diplaomasia sy ny numismatics. Izy ihany koa no mpanoratra ny maro ny asa ao amin'ny tantara. Ny mpampianatra ankapobeny tantara sy tantaran'ny Autriche J. Mauss (1778-1856) Tena malaza teo mpianatra.
Classical philology in 1784 dia ampianarin'Andriamanitra V. izy (1763-1816), izay, ankoatra ny Linguistics dia liana tamin'ny olana ny aesthetics, ary namoaka boky roa-fanangonana ny tononkalo. Nanoratra ihany koa izy asa maro teo amin'ny tantara ny boky sy gazety. Anisan'ireo pahaizana, mpampianatra I. Pollak (1785-1825) ary Leopold Umlauf (1757 - 1807) koa mendrika ny saina.
Ao amin'ny 1820-30s, fikarohana ao an-toerana sy ny humanities velona indray ny tantara. Ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i I.Mohylnytskyi nanomana ny fitsipi-pitenenana Okrainiana voalohany nivoaka tao amin'ny Galicie. Ary nivoaka tamin'ny 1829. ny teny fampidirana momba ny Ruthenian Fitenyao ambangovangony fohy momba ny tantaran'ny Ukraine. Tapa-kevitra ihany koa ny teny toy ny Okrainiana tsy miankina amin'ny East SAMPA teny. Mpampianatra momba ny Lviv National University
I.Lavrivskyi nanangona ny enin-boky Okrainiana-Poloney-Alemana malagasy sy nadika Ny Tale toy ny taloha Taona ho poloney. Ny fandraisana anjara manan-danja ho amin'ny fianarana ny tantara eo an-toerana natao ny Profesora M.Hrynevetskyi. Ary nanangona incunabula sy ny hafa tsangambato fahiny.
Lalàna siansa ny fotoan'andro miorina amin'ny antsoina hoe tantara sekoly ny lalàna. Prof. J. Winiwarter niavaka mpikaroka eo amin'ny sehatry ny lalàna sivily. Niasa tao Ukraine avy 1806 ny 1827 ary namoaka taratasy ara-tsiansa maro.
Ny zava-nitranga ny Poloney National Liberation Fikomiana ny 1830-1831 ary ny revolisiona ny 1848 Nisy vokany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny Lviv University. Mpianatra ao amin'ny oniversite no nandray anjara mavitrika amin'ny ny zava-nitranga. Nandritra ny fikomiana ny 1848, ny oniversite teo trano may. Ny trano famakiam-boky siantifika sarobidy, izay natao mihoatra noho ny 51 boky arivo, rava. Ihany koa ny sora-tanana sarobidy nandoro. Koa satria ny oniversite fitaovana efa simba be, tsy nisy fanadihadiana miseho nandritra ny fotoana ela.
Nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, oniversite trano nitarina. Koa satria 1851, ny University dia hita tao amin'ny trano iray ao St. Mykolay Street (ankehitriny dia Hrushevskyi Street). In 1891, manaraka ny tetikasa ny mpanao mari-trano J.Braunseis, trano mitokana ho an'ny simika, haibolantany sy mineralogical ary koa ho pharmacological Institiota dia naorina teo an Dlugosz Street (ankehitriny SS. Cyrille sy Méthode Street). In 1894, faritry ny vao niforona tao amin'ny sampam-pianarana fitsaboana Pekarska Street dia vita. In 1905, faritry ny vaovao no naorina ho an'ny University Library.
Ny fara tampony Fitambara-mpitantana ny anjerimanontolo tamin'izany fotoana izany dia ny Antenimieran-doholona Academic ahitana ny Rector, ny lefitra-Rector, deans, solontenan'ny sampam-pianarana sy ny mpitan-tsoratra. Toy izany ny oniversite lafiny fiainana toy ny fianarana dingana, fikarohana, degre siantifika, ary ny raharaha ara-panjakana teo amin'ny fahaizana avy amin'ny Antenimieran-doholona.
Nisy telo Lviv fahaizanareo amin'ny anjerimanontolo efa ho hatramin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo: ny toetsaina ny Lalàna, Filozofia sy teolojia. Ny soso-kevitr'izy ny isan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny fanjakana laharam-pahamehana, ny sampam-pianarana ny Lalàna dia nitarika tany amin'ny oniversite. Tamin'ny volana Novambra 1891, rehefa ela fahatarana, ny aotrisianina Emperor Franz Joseph I nanome baiko ny fanokafana ny sampam-pianarana fitsaboana. Ny lanonana dia mafy natao tamin'ny Septambra 9faha1894.
Tsirairay ny fahaizanareo efatra no nitarika iray iombonana vatana - mpampianatra ao amin'ny sampam-pianarana Filan-kevitra, na takelaka, izay ahitana ny Dean, ny mpampianatra ary ny roa voafidy solontena avy mpampianatra.
Sampan-draharaha ankehitriny ao amin'ny hevitry ny teny dia tsy nisy. Ny sampan-draharaha dia mifamatotra amin'ny olona ny mpampianatra, Izay namonjy ny Mazava ho azy fa ny lahateny. Na izany aza, nisy andrim-panjakana fikarohana sasany mifandray amin'ny oniversite izay teny mafy mifanaraka amin'ny foto-kevitra ankehitriny ny sampan-draharaha na ny birao. Fomba seminera natao tao ireo andrim-panjakana. Koa izy ireo dia nanana hevi maharitra, fitaovana, mpiasa sy ny trano famakiam-boky. Tamin'ny Septambra 1894, Archive oniversite dia ampitoero ho boky mitahiry nivoaka talohan'ny 1848.
Mpiasan'ny fampianarana ao amin'ny Oniversiten'i Lviv Nizara ny mpampianatra, fampianarana, mpanampy sy ny mpampianatra. Ny zo mba hampianatra tany amin'ny oniversite (na tao an-tanàna mampianatra) mety ho azo raha tsy aorian'ny fahazoana diplaoma, hiharan'ny habilitation sy ny fankatoavan'ny Ministeran'ny Fampianarana any Vienne. Ny haben'ny amin'ny sampam-pianarana Nitombo foana. Nisy ihany 27 mpampianatra ao amin'ny 1850/51. Ny isan'ny mpampianatra nitombo 169 in 1913/14. Mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Lviv ihany koa mizara ho sokajy sasany: tsotra mpianatra (ny olon-tsotra), miavaka mpianatra (ny miavaka) ary mpiasa an-tsitrapo. Amin'ny maha-fitsipika, vehivavy izay nanatrika lahateny amin'ny alalan'ny fifanarahana miaraka amin'ny mpampianatra niantsoana mpiasa an-tsitrapo. In 1851, 699 Nianatra tany amin'ny Lviv mpianatra University (ao anatin'izany ny 302 amin'ny Faculty ny Lalàna, 89 amin'ny Faculty ny Filozofia, 308 amin'ny Theological Faculty). In 1890/91, nisy efa 1255 (683, 189, 358 olona mifanaraka). In 1900/01, Nitombo ny isan'ny tany 2060 mpianatra (Lalàna Faculty - 1284, Faculty ny Filozofia -309, Faculty ny Medicine - 127, Theological Faculty - 340). In 1913/14, nisy 5871 mpianatra (3493, 1229, 971 ary 358 mifanaraka).
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, vehivavy Niady mafy mba ho afaka ny hanatrika anjerimanontolo. In 1897, ny vehivavy dia navela hianatra amin'ny Faculty of Filozofia, ary amin'ny 1900, amin'ny Faculty ny Fitsaboana sy ny Departemantan'ny Pharmacy. Vehivavy imbetsaka nitaky mba ho afaka ny hianatra tao amin'ny Lalàna Faculty, fa ny governemanta dia tsy hamela izany hitranga.
Ny ankamaroan'ny mpianatra nandoa satria afaka mianatra amin'ny oniversite. Mpianatra ny Teolojia navela Faculty tsy mba handoavana ny fianarany. Amin'ny misaina ara-pivavahana no nankafy tombontsoa toy izany ihany no anisan'ny mpianatra (ny mpianatra izay nametraka taratasy ny fahantrana sy enim-bolana lasa soa aman-tsara colloquia). Ankoatra ny saram-pianarana, mpianatra vola ho an'ny fanadinana, colloquia, seminera, ary noho ny mahazo mampiasa ny trano famakiam-boky.
Nisy ihany koa ny vatsim-pianarana mpianatra. Vatsim-pianarana dia fanomezana famatsiam-bola no tena avy amin'ny olona avy amin'ny tsy miankina. Ny tena malaza dia ny vatsim-pianarana atao hoe taorian'ny K. Ludwik, J. silaovaka, Yu. Tsalevych, Hayetskyi sy ny hafa. Mpianatra afaka mampiasa dormitories, fa ny isan'ny toerana dia voafetra.
Tamin'ny Lalàna, Filozofia sy fampianarana Theological misaina naharitra efa-taona, amin'ny Fitsaboana Faculty - dimy, amin'ny fanafody Departemantan'ny ny Fitsaboana Faculty - roa na telo taona. Ny taona akademika dia nizara ho roa semesters: ririnina (Oktobra 1 ho Martsa 20) ary ny fahavaratra (faran'ny Aprily - ny faran'ny volana Jolay) semesters. Mpianatra nanana safidy ny lohahevitra. Tamin'ny taona 70 fahaizanareo mampianatra rehetra dia natao indrindra indrindra tamin'ny teny alemà, Teny latinina tao amin'ny Theological Faculty; taranja vitsivitsy no ampianarina ao amin'ny Okrainiana sy amin'ny teny poloney. Aprily 27, 1869 araka ny didim-panjakana manokana navoakan'ny emperora, Poloney dia fantatra ho toy ny fiteny ofisialy ao amin'ny faritra. Vokatr'izany, Polonization tsikelikely teo amin'ny. In 1870, 13 taranja nampianarina amin'ny teny poloney, 46 in alemaina, 13 in Latina, 7 in Okrainiana. Jolay 4, 1871, Emperora Franz Joseph I nandidy ny fanafoanana ny faneriterena ny Bedin'ny ao amin'ny fiteny poloney sy Okrainiana ao amin'ny Lalàna sy ny filozofia misaina. Noho izany, in 1906, 185 taranja nampianarina amin'ny teny poloney, 5 in alemaina, 14 in Latina, 19 in Okrainiana.
Ao amin'ny 1870s, Ivan Franko, Okrainiana malaza mpanoratra, manam-pahaizana, mpandika teny, ara-politika sy olo-malaza nianatra bahoaka tao amin'ny filozofika Faculty of Lviv University. Izy no iray amin'ireo nahay Ukraine, izay niditra ny tantara ho toy ny "ny Titan ny Asa."
Famous mpahay siansa, mpanoratra, olo-malaza toy ny M.Pavlyk, O.Terletskyi, V.Navrotskyi, O.Makovey, Yu.Puzyna sy ny hafa nandany ny mpianatra taona any am-oniversite tamin'ny faramparan'ireo fahasivy ambin'ny folo sy ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo.
Ny fiainana ara-tsiansa Lviv University tamin'ny faramparan'ireo fahasivy ambin'ny folo sy ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo nandalo fiovana be. New lohahevitra dia nampidirina, efitrano fianarana vaovao, laboratoara niorina. Faculty mpikambana nanoratra boky sy ny boky fampianarana ary koa ny fikarohana manan-danja nitarika, indrindra eo amin'ny natiora fampianarana. Eo amin'ny sehatry ny siansa ara-batana ny anaran'ny mpampianatra V. Pierre, W. Urbanski, A. Handl, T. Staneck, I. Zakrzewski, M. Smoluchowski dia mendrika ny fanomezam-boninahitra. Manokana, Profesora V. Pierre nahazo ny fitaovana ho an'ny fizika laboratoara izay efa rava ao 1848. W. Urbański namoaka boky roa-boky siantifika Physique. In 1879, Mpampianatra momba ny fanandramana Physique T. Staneck (1826-1891) namoaka boky maro ao amin'ny Fizika sy ny Matematika. Koa satria 1899, izao tontolo izao fizika malaza M. Smoluchowski (1872-1917) niasa tao amin'ny oniversite. Ny tena asa izay nosoratany raha mbola niasa tany amin'ny oniversite dia"Ny Hetsika ny Gas molekiola sy ny Connection amin'ny teorian'ny Diffusion", "Ao amin'ny teorian'ny Brownian Kinetic molekiolan'ny Hetsika sy Suspension".
mpampianatra I. Lemoch, W. Żmurko, J. Puzyna, W. Sierpinski, miaraka. Janiszewski no solontenan'ny matematika Lviv siansa ao amin'ny University. Tutorials azo ampiharina eo amin'ny fototry ny geodesy amin'ny I. Lemoch, "On Matematika" amin'ny W. Żmurko sy ny roa-boky "Kevitra ny Analytic Functions " amin'ny J. Puzyna dia tokony ho voalaza ao lafiny io.
Ny sampan-draharaha voalohany ny simia dia nisokatra tany Lviv University in 1801. Mpahay simia miavaka indrindra ao amin'ny vanim-potoana dia Profesora B. Radziszewski (1838-1914) ary Profesora S. Opole (1886-1919), izay mpanoratra ny boky manan-danja eo amin'ny voajanahary simia, ary koa B. Lachowicz, izay Lohan'ny ny Sampan-draharahan'ny Inorganic Simia hatramin'ny nanorenana in 1894 ny 1903, sy ny S. Tołłoczko.
Geological Sciences dia tafiditra tao amin'ny lisitr'ireo maintsy foto-kevitra amin'ny amin'ny sampam-pianarana ny Filozofia in 1851. In 1852, Mineralogical Museum nosokafana. In 1864, ny Departemantan'ny Mineralogy dia nanorina. Ary nisy tarihin'ny F. kompà, ny mpamorona ny petrography maoderina sy ny mpanoratra "Ny Boky Momba Petrography" (1838-1912).
Teo am-piandohan'ireo 1880s, ny Sampan-draharahan'ny Jeografia University dia naorina, tarihan'ny Profesora A. Reman (1840-1917), fantatra noho ny asa ara-batana tao amin'ny jeografia ny Carpathians. Ny fandraisana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny Geographical Sciences no nahariana ny E. Romer (1871-1954) ary ny Okrainiana jeografia S. L. Rudnytskyi (1877-1937).
Ny mpikaroka Okrainiana H. Velychko (doctorat in 1889) no voalohany doctorat mpianatra ny Profesora A. Reman.
In 1852, ny roa Departments ny Haibiby sy Botanique dia naorina teo amin'ny fototry ny Department of Natural History. Ny fampandrosoana ny Haibiby tany amin'ny oniversite dia mifandray indrindra amin'ny anaran'ny manaraka ireto mpahay siansa malaza: B. Dybowski (1833-1930), ny mpanoratra ny mahery 350 antontan-taratasy ara-tsiansa, Profesora J. Nusbaum-Hiliarowicz (1859-1917), mpanorina ny sekoly ny mpino ny evolisiona poloney.
Siansa ara-tantara dia tena nitranga in Lviv. Ny mpanorina ny sekoly ara-tantara i Lviv X. Liske (1838-1891). T. Wojciechowski (1833-1919), The. Balzer (1858-1933), B. Dębińska (1858-1939) laharana eo miavaka ny mpahay tantara any Lviv sekoly ary koa L. Finkel (1858-1930), ny mpanoratra ny telo-boky "Ny Bibliographie ny Poloney History" ary "A History of Lviv University". From 1894 ny 1914, ny vao namorona Departemantan'ny Jeneraly Tantara sy History of Eoropa Atsinanana no nitodi-doha amin'ny M. Hrushevskyi (1866-1934), iray amin'ireo mpahay tantara lehibe indrindra ao Ukraine, ny mpanoratra ny 10-boky asa "A History of Ukraine-RUS", -jatony ny asa teo amin'ny tantara, haisoratra tantara, historiography, loharano fanakianana. M. Hrushevskyi koa ny mpamorona ny sekoly ara-tantara Okrainiana.
Lalàna siansa ao amin'ny tapany faharoa amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nifindra avy amin'ny tery empiricism ny in-lalina fianarana ny lalàna ary koa ny foto-kevitra ara-tantara sy ny filozofia. In 1862, departemanta roa - ny Departemantan'ny Lalàna sivily sy ny Departemantan'ny Lalàna Heloka Bevava sy ny fitsarana - dia nanomboka nampiasa Okrainiana ho toy ny fiteny ny fampianarana. Maro ny mpahay lalàna fanta-daza niasa tao Lviv oniversite: T. Pilat, E. ny, The. Ohonovskyi, M. Alerhant, The. Dolivskyi, M. Chlamtacz, S. Szachowski, P. Dąbkowski, J. Makarewicz, S. Dnistrianskyi sy ny hafa.
Okrainiana philology efa nampianarina tao amin'ny oniversite satria 1848 raha ny Departemantan'ny Ruthenian Philology dia nitodi-doha ny Ya. Holovatskyi (1814-1888), ny mpanoratra ny asa Ny fitsipi-pitenenana ny Ruthenian fiteny sy ny olona ny Hira ao Galicie sy Hongroà RUS. In 1849, Ya. Holovatskyi Notendrena Rector ny oniversite. The. Ohonovskyi, The. Kolessa, K. Studynskyi, I. Sventsitskyi nanohy ny asa Ya.Holovatskyi. The. Ohonovskyi`s zava-bita lehibe indrindra dia ny enina-boky History of Ruthenian Haisoratra.
Ny tantaran'ny poloney fianarany teny amin'ny anjerimanontolo dia mifandray amin'ny anaran'ny mpampianatra A. Malecki (1821-1913), R. Pilat (1846-1906), W. Bruchnalski (1859-1938), K. Wojcechowski (1872-1924), B. Gubrynowicz (1870-1933), J.Kallenbach, J.Kleiner, W.Hahn sy ny hafa.
Classical philology lehibe dia manana fomba amam-panao ao amin'ny Lviv University. Ny mpikaroka fanta-daza toy ny L. Ćwikliński (1852-1942), B. Kruczkiewicz (1849-1919) sy ny S. Witkowski (1866-1950) niasa tao amin'ny sampan-draharaha eo anatrehan'i 1918. Noho ireo, Lviv lasa foibe famoahana malaza eo amin'ny sehatry ny mpahay philology. Lectures in romanina philology efa natolotra hatramin'ny 1918.
Taorian'ny firodanan'ny ny Fanjakana Aotrisy-Hongria, I Galicie Nozanahin'i ny Polonina. tamin'ny Novambra 18, 1918, ny Minisitry ny antokom-pivavahana sy ny fanabeazana ny Polonina Namoaka didy manokana milaza fa i University Lviv mba ho raisina eo ambany fanaraha-maso ny. Ny University poloney atao hoe taorian'ny Jan Mpanjaka Kazimierz. Zavatra no hany fampianarana teny amin'ny fahaizanareo rehetra, afa-tsy ny Teolojikan'ny Faculty izay fitsipika sasany dia nampianarina amin'ny teny latinina. Ny sampana rehetra amin'ny fiteny Okrainiana dia nakatona. Ka ao anatin'ny roa na telo taona, Okrainiana mpampianatra sy ny docents nalefany. Okrainiana ireo mpianatra voafetra ny isan'ny kilasy dia afaka manatrika.
University fitantanana dia miorina amin'ny lalàna University (lalàn'ny 1924, 1929 ary 1934). The Academic Antenimieran-doholona, tarihan'ny ny Rector, nanohy ny asany toy ny fitambara-mpitantana. By 1924, ny University Nizara efatra fahaizanareo. Araka ny didim-panjakana navoakan'ny Ministeran'ny Oktobra 31, 1924, ny Faculty nisara-tsaina ny Filozofia roa samy hafa misaina: ny Faculty ny Humanities sy ny Faculty ny Matematika. Teo am-piandohan'ireo taona 1920, nisy 55 departemanta, 19 vondrona, 6 hopitaly, 2 polyclinics, amin'ny sampam-pianarana trano famakiam-boky, ny trano famakiam-boky ara-tsiansa sy ny tahirin-ny University, ary ny zaridainan-javamaniry tao amin'ny University.
Mandritra izany fotoana izany, ny University tsy nanana departemanta amin'ny fampianarana ny teny Okrainiana, tsy misy mpampianatra momba ny zom-pirenena Okrainiana. afa-tsy 1933, docent I. Sventsitskyi nahazo zo hampianatra. In1928 / 29, ny Departemantan'ny Okrainiana Philology nisokatra, tarihan'ny Profesora J. Janow.
Ny isan'ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Lviv, no anankiray amin'ny lehibe indrindra ao Polonina. From 1919/20 ny 1937/38, Nitombo ny isany avy 2,647 ny 5,026 olona. Ny fitsipiky ny «numerus clausus» nampidirina, araka izay nanana Okrainiana faneriterena ny fieken-keloka ho any amin'ny oniversite fianarana (tsy mihoatra noho ny 15% ny mpiadina, ny bao amin'ity tranga ity dia tsy latsaky ny 50%). Iray taona akademika no hanomboka Oktobra 1 ary hifarana amin'ny Jona 30. Ary nizara roa toko ny an- 3 faritra, na trimesters.
Aprily 23, 1923, Lviv University Nafindra tao an-trano teo aloha Parlemanta Galicie, izay nanjary ny lehibe indrindra fanorenana ny University.
Ao amin'ny 1920-30s, Lviv University nahavita be fahombiazana eo amin'ny sehatry ny matematika. Maro ny mpahay siansa sy ny mpahay matematika nianatra tany amin'ny oniversite: W. Sierpinski, H. Steinhaus, S. Ruziewicz, E. Żyliński (satria 1920), S. Banach (satria 1922), W. Niklibor sy J. Schauder (satria 1927), S. Kaczmarz (satria 1929), W. Orlicz (satria 1934), H. Auerbach sy ny S. Mazur (satria 1936). Namorona mafy izy ireo no mihevitra matematika-tanky, fantatra amin'ny anarana hoe "Sekoly Lviv ny Matematika". S. ambony (1892-1945), ny mpanoratra Ny teorian'ny Linear asan'ny fanahy Fields, dia heverina ho ny lohany.
Siansa ara-batana ny fe-potoana dia nisolo tena ny Profesora R. Negrusz, S. Loria, L. Infeld, W. Rubinowicz sy ny hafa. Profesora E. trondro, izay nitarika ny Kintana Observatory, niasa tao amin'ny sehatry ny astronomia avy 1932. S. Tołłoczko, V. Ishebiatovskyi, V. Kemula hisolo tena zava-bita eo amin'ny sehatry ny simia. V. Kemula doha ara-batana ny Departemantan'ny Simia voaforona tao amin'i 1937.
Haibolantany siansa dia nivoatra bebe kokoa ao amin'ny Oniversiten'i. In 1921, prof. Z.Weyberg ka nitodi-doha namorona ny Departemantan'ny Crystallography. Manarakaraka ireo dia ny sampan-draharaha dia nitodi-doha ny L. Chrobak. In 1924, ny Departemantan'ny Mineralogy sy Petrography niforona, tarihan'ny prof. J.Tokarski.
Geographic siansa Lasa eo ambany fitarihan 'ny mpahay siansa malaza E.Romer. A.Zierhoffer niasa tany an-tsaha ny jeografia ara-toekarena.
Ny fikarohana biolojika nentin'ny Profesora J. Hirsler (1883-1951). afa-tsy izy, B.Fuliński (1881-1942), H.Poliushynskyi, K.Sembrat, R.Kuntze, J. Noskiewicz, S.Piliavskyi, L.Monne, Ya.Romanyshyn niasa tao amin'ny Institute of Haibiby.
In 1926, ny Departemantan'ny fampitahana Anatomy dia ovana hahazo Institute, izay tarihan'ny prof. K.Kwietniewski (1873-1942).
From 1918 ny 1924, florist T.Wilczyński sy bôtanista-jeografia sy ny paleobotanist M.Koczwara niasa tao amin'ny Departemantan'ny Botanique. From 1924, ny sampan-draharaha dia nitodi-doha ny S. Kulchyńskyi. Ny asa fikarohana ao amin'ny vanim-potoana io dia tena mifandray amin'ny zavamaniry (S. Kulchyńkyi, S.Tolpa, M.Kostyniuk, H.Koziy). Ny mpampianatra ny fototra physiology S.Krzemeniewski dia fanta-daza mpahay siansa.
Tamin'ny vanim-potoana interwar, sampana vaovao tao amin'ny Medical Faculty, ny Departemantan'ny Biologie (1920), General Medicine (1932), fanafody Simia (1932), Health Care sy ny History of Medicine (1930), ny zavamiaina bitika (1936) nisokatra.
Asa J. Badian (1930-1937) eo amin'ny sehatry ny cytology ny bakteria nahazo fankatoavana maneran-tany. J.Lenartowicz dia fanta-daza hoditra. In 1936, N. Gąsiorowski nandamina ka nitodi-doha ny Departemanta momba ny mikraoba,. Profesora R.Weigl (1883-1957) no malaza indrindra ny fitsaboana ny zavamiaina bitika. From 1922, ny Sampan-draharahan'ny sady mpikaroka dia tarihan'ny J. Parnas.
Lviv-Warsaw Sekoly filozofia dia fantatra tsara lavitra mihoatra Polonina. Ary nisy naorin'i K. Twardowski (1866-1938). Nisy ihany koa poloney filozofika Society miasa ao Lviv University, izay nandefa boky sy gazety maro. mpahay siansa Ya.Łukasiewicz, A.Tarski, I.Dąbska, S.Lushchevska, H.Melberh, L. Chwistek, M.Borovskyi, R.Ingarden, L.Blaustein sy ny hafa an'i Lviv-Warsaw Sekoly Filozofia.
Fikarohana ara-tantara no nisolo tena ny mpikaroka malaza K. Chiliński (1880-1938), J. Ptaśnik (1876-1930), E. Modelski (1881-1966), F. hanozongozona, NW-seza (1875-1953) ary ny maro hafa.
Teo amin'ny tantaran'ny lalàna, dia niasa mpampianatra O.Balzer, P.Dąbkowski, docent K.Koranyi; prof. M.Allerhand, K.Stefko, E.Tiell, A.Doliński niasa tany an-tsaha ny lalàna sivily sy ny dingana, J.Markewicz (ny heloka bevava lalàna), prof. P.Ehrlich (-bahoaka iraisam-pirenena ny lalàna).
Zavatra fandinihana dia iray amin'ireo mpitarika saha. E.Kucharski sy K.Kolbuszewski nanohy ny asa tao an-tsaha. Fiteny tantaran'ny poloney fianarana ny fotoana dia mifandray amin'ny anaran'ny A. Kalina, A. Kryński, K. Nitsch, H.Ulaszyn, H.Hartner ary indraindray R.Pilat sy W.Bruchnalski. Ny asa manan-danja indrindra amin'ny vanim-potoana io dia ahitana ny boky amin'ny H.Hartner (1892-1935) Fitsipi-pitenenana ny Contemporary Poloney Fiteny.
Okrainiana philology tany amin'ny oniversite dia mifanitsy amin'ny prof. J.Janów, klasika philology ny prof. S.Vitkovskyi sy R.Ganszyniec (1888-1958), SAMPA fianarana avy Z.Czerny.
In 1925-1935, ny Departments ny teny Arabo, hebreo, Aramaic, Tiorka, Mongoliana, Indian, Philology Iraniana sy ny Departemantan'ny ny History of the East niasa tao amin'ny University. Prof. M.Sharr, prof. Z.Smogorzewski, prof. W.Kotwicz, prof. G.Blatt, A.Tavaronskyi sy J. Kurylowicz Anisan'ireo fanta-daza sy pahaizana tatsinanana.
Araka ny fifanarahana miafina ny fifanarahana eo Alemaina sy ny Firaisana Sovietika, aogositra 23, 1939, West Ukraine no lasa faritra ambanin'ny fitarihana ny Firaisana Sovietika. tamin'ny Septambra 22, Miaramila sovietika niditra tao Lviv. Oktobra 26, 1939, ny Antenimieram-bahoaka ny Western Ukraine nilaza ny fitoriana ny Sovietika hery.
Nandritra izany fotoana izany, Lviv University nandalo fiovana goavana. Eo ambany ny Sata ny Fampianarana Ambony ny URSS, rafitra fandaminana ifotony ny oniversite ho toy ny rafitra ny fampianarana ambony maimaim-poana sy ny fampianarana maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena rehetra natao. Ny Theological Faculty i intsony. Fanafody sy ny Fitsaboana Departments dia averina alamina ho Sekoly Ara-pitsaboan'i. Tamin'ny volana Oktobra 1939, sampan-draharaha vaovao no niforona anisan'izany ny departemanta 'ny History of Marxism-Leninism, Dialektika sy Historical fitiavan-karena, Toe-karena ara-politika, Okrainiana Fiteny, Okrainiana Haisoratra, Rosiana Language, Rosiana Haisoratra, ny History of the URSS, ny History of Ukraine sy ara-batana Education. Tena-mahay mpampianatra ireo mba hampianarana ny tanora miorina amin'ny foto-kevitra marksista-Leninist sy ny zavatra ara-nofo fijery.
On Dec 2, 1940, Filan-kevitry ny University neken'ny lalàna vaovao University, izay nilaza fa olom-pirenena rehetra, manan-jo hianatra tany amin'ny oniversite na inona na inona ny ara-tsosialy fototra, lahy sy ny vavy, hazakazaka sy ny zom-pirenena.
Mpahay siansa malaza nasaina hiasa tany amin'ny oniversite. Anisan'izany nisy mpahay tantara haisoratra M. Vozniak, haisoratra mpanao tsikera V.Shchurat, folklorist sy musicologist F. Kolessa, mpanoratra sy ny mpitsikera haisoratra M.Rudnytskyi, mpahay tantara I. Krypyakevych, ny matematika sy ny hafa M.Zarytskyi. Ny Vahoaka Commissariat ny Fampianarana koa dia nanasa 45 mpikaroka avy any Kyiv sy Kharkiv. mpahay tantara, docent M.Marchenko Voatendry Rector.
Araka ny didim-panjakana navoakan'ny Presidium 'ny Filankevitra Ambonin'ny tatỳ URSS Janoary 8, 1940, ny anaran 'ny mpanoratra malaza Okrainiana sy ny mpandinika Ivan Franko dia nomena tamin'ny Lviv University.
Janoary 15, 1940, ny oniversite nanomboka niasa araka ny fandaharam-pianarana vaovao miorina amin'ny lalàna nankatoavin'ny. Tsy Nizara dimy fahaizanareo: ara-tantara, philological (Departemanta ny Teny sy ny Haisoratra Okrainiana, SAMPA tsy Philology, Romano-SAMPA Philology), ny Faculty ny Lalàna, ny Faculty ny Fizika sy ny Matematika (Departemanta ny Matematika, Mechanics, Fizìka), ny Faculty ny Natural Science (Departemanta ny Haiaina, Simia, jeografia, Haibolantany). Filan-roa vatana vaovao niforona: ny filan-kevitra akademika ny oniversite sy ny filan-kevitra amin'ny sampam-pianarana. Tapa-kevitra izy ireo fanontaniana ny fanabeazana, fomba fiasa, asa ara-tsiansa ary koa niresaka ara-tsiansa diplaoma sy anaram-boninahitra akademika. Ny sampan-draharaha foana ny tena fampianarana sy ny fikarohana vondrona. In 1940, nisy 52 departemanta. Izy ireo nanao asa fanofanana, mandroso taranja, seminera sy ny fampianarana manokana fandaharana, nitarika fikarohana.
Tamin'ny humanities ny toetsaina ny fampianarana naharitra efa-taona ary ny toetsaina ny siansa voajanahary nandritra ny dimy taona. In 1940, extramural fampianarana no nampiditra tao ny toetsaina ny tantara, Philology, Natural Science, ary Matematika. Ny sampana ny Union fifandraisana Institute-dalàna nisokatra tao amin'ny Lalàna Faculty.
Ny fivoriana voalohany ny mpampianatra ara-tsiansa natao tao Janoary-Febroary 1941. Tamin'ny Aprily, Mpianatra Conference voalohany natao. In 1940, ny sampan-draharaha, nahazo diplaoma teny dia nisokatra.
Na izany aza, ny asa no nosakanan'ny alemà fanafihana ny Firaisana Sovietika sy ny fananiham-bohitra miaramila Nazia Jona 30, 1941. Ao amin'ny voalohany 70 andro, ambony mpahay siansa ny oniversite, oniversiten'ny andrim-panjakana sy ny fahasalamana no voasambotra, ary rehefa afaka kapoka sy ny fanararaotana no voatifitra teo amin'ny manodidina ny amin'izao fotoana izao Street Sakharova . manam-pahaizana malaza, anisan'izany T.Boj-Żeleński, R. Longchamps Berier, M. isan-karazany, H. Auerbakh, S. zavatra, teo anivon 'ny novonoina.
In 1942, Alemà manam-pahefana nakatona toeram-pianarana ambony kokoa any Ukraine. Norobaina ny mpanani-bohitra ka nanimba ny fananan'ny amin'ny University. ny fitaovana, izay an'ny laboratoara teo ny toetsaina ny Fizika, Matematika, ary Simia ary koa ny trano famakiam-boky tao amin'ny Departemantan'ny Folklore sy ny Ethnography hita isa 15 boky arivo, dia naondrana tany Alemaina. Ny tena famakiana efitrano ao amin'ny oniversite Siantifika tranomboky dia rava sy boky sarobidy boky, tokony ho dimy arivo sy incunabula boky tranainy sy 500 ireo sora-tanana sarobidy nesorina.
Ny Famerenana amin'ny Laoniny ny University nanomboka avy hatrany taorian'ny tanàna nafahana avy amin'ny tafika nazia. Jolay 30, 1944, ny fivoriana natao tao amin'ny University, aiza ny mpandray anjara (127 mpampianatra sy ny mpiasa ara-teknika) nangataka tamin'ny intelligentsia mba handray anjara mavitrika amin'ny fanorenana ny Toe-karena, fanabeazana, ara-kolontsaina sy fanabeazana andrim-panjakana tao an-tanàna.
Nandritra ny tapany faharoa 1944 sy ny tapany voalohany 1945, tena miaraka amin'ny fanampian'ny mpianatra sy ny mpampianatra, maro ireo trano nohavaozina oniversite anisan'izany amin'ny sampam-pianarana ny Biologie amin'ny 4 Shcherbakova Street (ankehitriny Hrushevskoho Street), ny toetsaina simia sy Physique amin'ny 6 ary 8 Lomonosova Street (Cyrille sy Méthode ankehitriny Street). Ny trano famakiam-boky sy ny fikarohana amin'ny hotely 7 Hertsena Street dia nohavaozina. Fanarahamaso ny Momba ny Kintana sy ny Botanical Garden dia ampahany nanorina indray.
Taorian'ny mihoatra noho ny telo-taona fiatoana, amin'ny 15 Oktobra 1944, 194 faharoa, fahatelo sy fahefatra taona nanomboka ny fianarany ireo mpianatra ao amin'ny University. 226 mpianatra taona voalohany no nanomboka ny fampiofanana Novambra 1, 1944. Misy afaka misoratra anarana amin'ny anjerimanontolo na dia taorian'ny nanombohan'ny taom-pianarana iray. Mandra-pahatapitry ny volana Martsa 1945, 799 Nianatra ny mpianatra tany amin'ny oniversite. Methodological atrikasa, ny Kintana Observatory, ny zaridainan-javamaniry, ny trano famakiam-boky siantifika, haibolantany ary javamaniry mozea indray ny asany.
In 1948, Profesora H.Savin, Mpahay siansa malaza eo amin'ny sehatry ny Milina, Notendrena Rector ao amin'ny Oniversiten'i. From 1951 ny 1963, ny University dia nitodi-doha ny Ye.Lazarenko, ny mpandinika ny nofon-, mpahay siansa malaza, mpampianatra, mifanaraka mpikambana ao amin'ny Akademia Momba ny Siansa URSS, Akademisiana ny URSS Akademia Momba ny Siansa. From 1963 ny 1981, Profesora M.Maksymovych, ny mpahay siansa in herinaratra injeniera, dia Rector, in 1981-1990 - Profesora V.Chuhayov, mpikaroka eo amin'ny sehatry ny tantara.
Taorian'ny ady nitohy ny fiovana. In 1945, ny Faculty simia amin'ny sampan-draharaha efatra dia naorina. Rehefa tapitra ny 1950, ny Faculty of Foreign teny niforona. Noho izany, nisy afa-tsy sivy oniversite fahaizanareo. Mandritra izany fotoana izany, sampan-draharaha vaovao nisokatra, nitombo ny isany 71. In 1953, ny Faculty ny Fizika sy ny Matematika nizara roa toko eo an-Faculty ny Milina sy ny Matematika sy ny Faculty ny Fizika. In 1975, ny Faculty ny Milina sy ny Matematika nizara roa toko eo an-Faculty ny Matematika sy ny Faculty of Applied Matematika sy Mechanics .
In 1959, ny University ny General Department of Foreign Fiteny (Anglisy sy alemà) dia naorina noho ny fampianarana teny vahiny amin'ny tsy fahaizanareo manokana.
In 1953, ny Sampan-draharahan'ny fanaovan-gazety dia nisokatra ho toy ny ampahany amin'ny Faculty of Philology. Next taona, izany no nokarakaraina tao an-Faculty ny Fanaovan-gazety.
In 1966, ny Faculty ny Toekarena dia naorina miorina amin'ny Lviv sampana Kyiv National Institute of Toekarena. Tsy nahitana manaraka ireto departemanta: toekarena, Fandaminana sy Planning ny Toe-karena, Finance, Accounting sy ny Statistics, Fomba matematika in Toekarena.
In 1975/76, ny oniversite nanana 13 fahaizanareo. Dia araka izany pianarana taona, ny fiomanana sampam-pianarana ho an'ny olom-pirenena vahiny no natao. Izany Nizara ny Departemantan'ny ny fiteny Rosiana sy ny Departemantan'ny Natural Science.
Ny fiakaran'ny isan'ny fahaizanareo, departemanta, ny fampandrosoana ny faritra fikarohana vaovao sy ny fanatsarana ny fampianarana dingana mifandray amin'ny siansa sy ny teknolojia ilaina fandrosoan'ny oniversite fanitarana ny trano. In 1950/51, ny University nanana 12 akademika trano amin'ny faritra tanteraka ny 42.8 ny taona arivo. M, sy ny 1959-1962, ny faritra miasa dia nitombo noho ny fanavaozana ny Sampan-draharahan'ny simia in Lomonosova Street. Tamin'ny faramparan'ireo taona 50 - tany am-boalohany 60 taona, ny oniversite nahazo efitrano in Sichovykh Striltsiv Street (Septambra teo aloha 17 Street), izay mitoetra trano famakiam-boky ny mpianatra, ny Faculty ny Jeografia sy ny Faculty ny lalàna sy ny tsy miankina maro laboratoara. In 1966, ny oniversite nomena ny trano ao amin'ny Avenue Svobody 18, izay mitoetra amin'ny sampam-pianarana momba ny Toekarena. In 1971, ny Faculty ny Fizika nomena faritry vaovao ao amin'ny Drahomanova Street. In 1984, trano iray hafa teo amin'ny arabe ihany no nomena ny oniversite. In 1984, ny faritra ny anjerimanontolo hevi no mpifehy 55 ny taona arivo. M.
Ny zaridainan-javamaniry dia any amin'ny fizarana tranainy indrindra ao amin'ny University. In 1957-1959, noho ny drafitra fampandrosoana efa niasa avy. Ny zaridainan-javamaniry dia nizara ho roa fizarana: ny fizarana ny zavamaniry teny fampidirana sy ny fizarana ny fototra physiology. In 1970, dia nandray ny toeran'ny fikambanana ara-tsiansa.
Ny trano famakiam-boky ara-tsiansa ny anjerimanontolo mitana anjara toerana lehibe teo amin'ny dingana fanabeazana sy ny fikarohana. Nandritra ny ady taorian'ny taona, ny famoriam-bola ny loharanom-baovao Nitombo efa ho avy 5 fotoana. In 1985, ny vola nihoatra 2 700 arivo vondrona.
Ny fampandrosoana ny fanabeazana, fomba voarindra sy ara-tsiansa ny asa ao amin'ny Oniversiten'i dia nanampy ny fananganana ny Trano Famoaham-boky ao amin'ny 1947. Ny lamin 'ny Minisitry ny Fampianarana Ambony ny URSS tamin'ny Aprily 1957, dia averina alamina tao an-tranon'i famoahana didy Lviv University. Izany ny asan'ny ny vondrona ara-drafitra 'ny oniversite mandra- 1968 (averina alamina tatỳ aoriana tao an-Trano Famoaham-boky ao amin'ny famoahana fikambanana "High School" ao amin'ny Lviv University, ary amin'ny 1989, dia averina alamina ho any an-Trano Famoaham-boky mahaleotena "Svit"). In 1948, diary "siantifika Notes" dia nanomboka, izay nampiseho ny fikarohana siantifika atao amin'ny ny toetsaina. Koa satria 1962, ny gazety nivoaka eo ambanin'ny lohateny ny Naukovi Zapysky (Fizotran'ny ao Lviv University). Mpianatra ihany koa ny tsy foana miraharaha amin'ny famoahana asa. Telo ny olana ny mpianatra "Almanac" (1954, 1956, 1958) nivoaka. Maro ny boky sy ny fitaovana fampianarana natao pirinty tany amin'ny oniversite milina offset noforonina ao amin'ny laboratoara 1959.
Nandritra ny ady taorian'ny taona, ny oniversite namorona ekipana mpahay siansa tena mahay. From 1946 ny 1965, University mpiasa niaro 53 doctorat dissertations, ary 52 dia niaro ao amin'ny vanim-potoana avy 1965 ny 1975. From 1946 ny 1975, 842 taratasy misy hevitra no niaro. University mpampianatra no voafidy sy voatendry ho academicians sy mifanaraka mpikambana ao amin'ny Firaisana Sovietika, ary koa boninahitra nomena diplaoma. Izany dia mampiseho ny ankapobeny fankatoavana ny sarobidy tokoa ny fanampian'izy ny siansa. Manokana, in 1948, mpampianatra O.Vyalov, B.Hniedenko, H.Savin, in 1958, Profesora I. Krypyakevych ireo mpikambana ao amin'ny Akademia Momba ny Siansa tatỳ URSS. In 1961, Profesora V.Soboliev lasa mpikambana tao amin'ny Akademia Momba ny Siansa URSS. University nahazo diplaoma O.Parasiuk, Ya.Pidstryhach, I.Yukhnovskyi, V.Panasiuk, R.Kucher, M.Brodin, Ye.Fradkin teo anivon 'ny mpikambana ao amin'ny National Academy ny Science. Okrainiana malaza mpanoratra R.Bratun, D.Pavlychko, R.Ivanychuk, R.Fedoriv, V.Luchuk Nianatra tao amin'ny University.
Tamin'ny taona 1950 sy ny 60, fikarohana ekipa no niforona tao amin'ny departemanta sy ny fahaizanareo. Izany dia nanome ny fototra ho amin'ny fampandrosoana ara-tsiansa saha, anisan'izany ny teoria ny plasticity sy ny hery, Differential equations, teorika mineralogy, ara-batana sy simika famakafakana ny vy, -pirenena harena ara-toekarena sy ny kolontsaina tandrefana faritra ny URSS, fifandraisana ara-tantara sy ara-kolontsaina eo SAMPA firenena. Ny fampandrosoana ny ankamaroan 'ireo fitsipika ao amin'ny taona manaraka namaritra ny lalan'ny ara-tsiansa Lviv University. Ao amin'ny 1960-70s, panjakana fikarohana lohahevitra ambany fandrindran'ny ny URSS nitatra be. Ny fifanarahana ara-toekarena fanontaniana tonga tsikelikely any amin'ny fiainana.
Isan-taona, ny isan'ny mpianatra nisoratra anarana tamin'ny taona voalohany nanjakan'i oniversite nitombo. Izany nahatonga ny famoronana ny departemanta vaovao. In 1950, 575 ny olona niditra tao amin'ny oniversite toy ny mpianatra taona voalohany, in 1970, nitombo ny isany 1100, in 1985, ho mihoatra noho ny 1,300 olona. In 1947/48, tapa-potoana nanomboka niasa birao, mamela handray fianarana ambony sy ny asa tamin'izany andro izany. In 1951-1953, extramural oniversite taranja no nandefa. 300-325 olona nisoratra anarana teo amin'ny Mazava ho azy fa. In 1965, ny isany nitombo efa ho 1,200 olona. In 1959, ny oniversite ny mpianatra nanomboka fieken-keloka ho an'ny hariva antokon'ny ny teny sy ny boky aman-gazety Okrainiana, tantara, Fizìka, Matematika, simia. In 1960-1962, hariva antokon'ny lalàna, ny teny sy ny boky aman-gazety Rosiana, Anglisy sy alemà, biolojia dia nanampy; in 1963-1965 - onjam-peo sy ny fitaovana elektronika Fizika, kajy amin'ny solosaina, Matematika, mpikaroka; in 1966 - fandaminana ny toe-karena sy ny orinasa, ampamoaka; in 1970 - ny fandaminana ny milina fanodinana ny vaovao ara-toekarena. Fieken-keloka eo amin'ny taranja fiofanana hariva voalohany tamin'izany taona dia 300-350 olona isan-taona. Fampianarana hariva no nifarana tamin'ny 1992.
From 1969 ny 1996/97, fiomanana taranja izay nanofana tanora ho an'i oniversite niasa tao amin'ny University. Koa satria 1971, ny fiofanana sy ny University nihazakazaka retraining. Koa satria 1989, 5,998 olona nahazo ny lehibe faharoa ao amin'ny Institute for Fianarana sy ny fampiofanana.
Ny fanambarana ny fahaleovantenan'i Okraina dia pejy vaovao teo amin'ny tantaran'ny Lviv University. In 1990, ny oniversite dia tarihin'ny Profesora University, Doctor ny Science Ivan Vakarchuk. Noho ny fampiharana ny fanabeazana goavana fanavaozana, ny vaovao departemanta-misaina sy ny novelarina. In 1992, ny Faculty ny Fifandraisana iraisam-pirenena, Faculty ny Filozofia nisokatra; in 1997, ny Departemantan'ny Pre-oniversite Fampiofanana. In 1992, ny fikarohana ara-tantara Institute, tarihin'ny Doctor ny History Ya. Hrytsak naorina. Koa satria 1997, ny manaraka no niforona anjerimanontolo sampan-draharaha, anisan'izany ny Lalàna College, Research Center ny Humanities, ny Institute literatiora Fianarana, ny Center for Italiana Teny sy ny Kolontsaina. Koa satria 1978, misy mitohy ny fiaraha-miasa amin'ny faritra Lviv Junior Akademian'ny Siansa, izay manana isan-taona momba ny 1,000 mpianatra. Ny University mihazona fampianarana, lectures, fikarohana atrikasa ho an'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny ny manam-pahaizana.
Oktobra 11, 1999, araka ny didin'ny ny Filohan'ny Ukraine ny Ivan State University Franko Lviv dia nahazo ny toerana misy "National".
Amin'izao, Lviv University Heverina iray amin'ireo andrim-panjakana malaza indrindra eto amin'ny firenentsika. Tsy nahazo voninahitra avo iraisam-pirenena ka tonga mahery vaika foibe ara-tsiansa.
Ary tamin'ny pediment ny tena fananganana ny Lviv University misy teny filamatra: "Ny tontolo iainana ho an'ny firenena ny fanabeazana ny olom-pirenena» (nahita fianarana olom-pirenena, ny voninahitry ny tanindrazana). Ny vondrom-piarahamonina oniversite miasa mafy mba ho tanteraka izany hevitra. Ny fanovana ny University ho maoderina andrim-panjakana Eoropeana amin'ny fiarovana ny fomban-drazana tsara indrindra akademika-pirenena no tena tanjona ny fiaraha-monina ny oniversite.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Ivan Franko National University of Lviv ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Ivan Franko National University of Lviv tamin'ny Map
Ivan Franko National University of Lviv Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Ivan Franko National University of Lviv.
Ny National University of Ostrog Academy mahitsy